Kukwidzika Sun Pictures Dzidzo: Joannah Anderson Hurukuro - NAB Kuratidza Nhau neChirongwa Beat. Mutasviki wezveNhepfenyuro weNAB Ratidza, Mugadziri weNAB Ratidza LIVE
musha » nhau » Kusimuka Sun Pictures Dzidzo: Joannah Anderson Hurukuro
Kusimuka Sun Pictures Dzidzo: Joannah Anderson Hurukuro
Kudzidza kuve nyanzvi.
Adelaide, South Africa- Kusimudza Sun Pictures Dzidzo yakashanda sematombo anotsvaga avaridzi vechidiki vakawanda vakashandisa kukwidza kubva mukirasi kuti vashande. Joannah Anderson ndomumwe. Sekunge wapedza kubudirira RSP / UniSA 12-Week Graduate Certificate Program in Dynamic Effects uye Chiedza pamberi pegore rino, Joannah achangobva atanga basa rake rokutanga seJunior 3D Lighting Artist paTechnicolor yachangobva kutumirwa Studio Film studio muAdelaide. Kutengeswa, Victoria wekuzvarwa iye zvino achange achiisa hutano hwaakadzidza muhutano hweHNUMXD maitiro ekushandisa kushandiswa mumapurogiramu efirimu anotarisirwa kumafirimu pasi rose.
Joannah achangobva kutaura naRSP pamusoro pezviitiko zvake paRSP, basa rake idzva uye remangwana rake.
RSP: Wakatanga kuongorora kupi?
Joannah Anderson: PaAIE (Academy of Interactive Entertainment) muAdelaide. Ndakanga ndiri 18 uye ndaida kudzidza nezvemifananidzo asi musha wangu, Sale, haina kupa chero chinhu. Sezvakaitika, vabereki vangu vakanga vachironga kuenda kuAdelaide uye AIE yakanga ichangobva kuvhura panguva iyoyo, saka ndakaenda navo.
JA: 3D mifananidzo uye zvinooneka. Ndakatanga muchirongwa chemutambo, asi pakupedzisira ndakaendeswa kufirimu ndokuwana Advanced Diploma mu Screen uye Media.
RSP: Chii chakakutungamirira kuRSP?
JA: AIE yakanga ine imba yakazaruka uye mumwe wevatauriri aibva kuRising Sun Pictures. Ndaifunga kuti dai ndisina kupiwa basa rakananga kuchikoro, ndaizowana mamwe ruzivo paRSP.
RSP: Wakawana sei chikoro?
JA: Chakanga chiri kusimudzira zvechokwadi. Iwe unoshanda munzvimbo ye studio uye unodzidza kubva kune vashandi, uye iwe unogona kuita navo panguva ipi zvayo. Ndine manzwiro ekuti sei studio huru inoshanda, kuti vanhu vanobatana sei. Dzidzo yacho pachayo yakanga iri purogiramu yeChikoro cheStifiketi muDynamic Effects uye Lighting. Takanyanya kushandisa Houdini. Yakanga iri nguva yangu yokutanga kushandisa iyo software.
RSP: Zvakanga zvakaoma here kumuka kuti uende nokukurumidza?
JA: Zvishomanana. Vamwe veaidzidza navo vaiva nehupenyu naHoudini, saka ndaive ndichida kuita. Asi vose vakandibatsira. Pfungwa iyi yakanga yakasiyana chaizvo neyandaiishandisa kare, asi kamwechete pandakawana kuvimba, zvakanga zviri nyore.
RSP: Wakanakidzwa here?
JA: Oo, hongu, ndaifarira! Zvaiva zvinoshamisa.
RSP: Pane mumwe wevarayiridzi vako akaita zvakakosha kwauri here?
JA: Ehe. Greg naSamu, vadzidzisi vedu vechiedza, vakashandura maonero angu ose pamusoro pechiedza. Pandakazopinda muchikoro, ndaifunga kuti handichazofariri chiedza. Ndaida kuenda kuVFX, asi hafu iyo yakaputika. Greg akatiratidza isus kubva Monsters, Inc. uye akaratidza zvinyorwa zvitsva, kuti ungashandisa sei mwenje kuti uwane mamwe mavara. Akanga aine shungu kwazvo pamusoro payo, uye iyo yakabviswa kwandiri. Ndakadzidza kuti unogona kutaurira nyaya nechiedza, kana kutungamirira ziso revateereri kune imwe nzvimbo yefirimu. Akanyatsodzidzisa nzira yekushandura chiedza muunyanzvi.
RSP: Ko hutano hwako hwakashandura zvakadini pane mavhiki e12?
JA: Vakagadziridza zvikuru, nekukurumidza zvikuru. Apo ini ndakanyorera kuRSP, handina kufunga kuti ndaizogamuchirwa. Nenguva yandakapedza hurukuro, ndaiva nechiedza chekuratidza kuti ndaida. Ndakatumira kuTechnicolor ndine chivimbo chokuti ndakawana mukana wekuita basa. Ndainzwa zviri nani zvikuru pamusoro pangu pandakapfuurira mberi.
RSP: Kunze kwedzidzo yekugadzira, iwe wakadzidzei nezvekuva unyanzvi wemhizha?
JA: Takapinda masikati-mu-mu-mararamiro atakapinda kune ose mapoka ezvigadzirwa zvemabhizimisi vakataura nesu nezvebasa ravo. Takavawo nezvimwe zvikamu zvevadzidzi vaitipa mazano pamusoro pekutsvaga mabasa, maitiro atinenge tichibvunzurudza, uye izvo vashandi vanotarisa mune zvinyorwa. Izvozvo zvakandibatsira zvakanyanya nebvunzurudzo yangu yebasa.
RSP: Ko purogiramu yakazadzisa zvamunotarisira here?
JA: Yakapfuura kwavari. Pakutanga, ndaifunga kuti zvaizova zvakaoma zvikuru, kuti handinganzwisisi chero chinhu. Asi izvozvo hazvina kuitika. Zvose zvaunofanira kuita ndezvokuzvitsaurira uye kushanda zvakaoma. Mumwedzi mitatu, Rising Sun Pictures yakandidzidzisa nzira yekuve nyanzvi.
RSP: Wakaisa sei basa rako paThe Mill?
JA: Ndine muzukuru anoshanda mubhizimisi uye akandiudza kuti technicolor iri kuuya kuAdelaide. Ndakashanda pane imwe nguva. Vhiki mbiri gare gare, vakandiidza kuti ndiwane hurukuro. Vhiki mbiri shure kweizvozvo, ndakapiwa basa.
JA: Ndatenda. Zvaive zvakanaka kudzidziswa uye nguva yakanaka.
RSP: Basa rako rinosanganisirei?
JA: Ini iye zvino ndave kudzidziswa mune dhipatimendi rekumedza. Isu hatina kutanga kugadzirwa. Vanoshandisa Katana. Saka, ndiri kudzidza purogiramu itsva zvakare zvakare. Asi zvakanaka. Zvakafanana zvikuru neHoudini.
RSP: Pakupedzisira iwe uchange uchishanda pamishonga ekuvaraidza?
JA: Ratidza mafirimu zvikurukuru. Ndanga ndichida kushanda mafirimu kubvira ndichiri mwana muduku. Izvo zvinotyisa kuti ini ndichishanda mumafirimu mubasa rangu rokutanga.
RSP: Unotarisira kupi kubva pano?
JA: Ndinoda kuenda kuVancouver kana kuLondon. Ndine kurota kwezuva rimwe ndichizarura studio yangu. Asi izvi ndezvekuti ndinoita zvishoma zvekutengesa uye ndinoziva vanhu.
RSP: Ndezvipi mazano kunewe vamwe vanoda vanyori?
JA: Fadzwa nekuita. Usave wakaoma zvikuru iwe pachako. Isu tose tinofanira kutanga pane imwe nzvimbo. Zvinotora maawa mazhinji kuti uve nyanzvi yekushanda. Shingairira uye mubatanidze mharidzo yakasimba inoratidza kuti uri ani semunhu. Iva nechivimbo mubasa rako uye iwe uchawana. Kana iwe wandiudza gore rakapera kuti ndaizoshanda semucherechedzi wemwenje, ndingadai ndaseka. Asi pano ini ndiri.
Pakusimudza Sun Pictures (RSP) tinoita kuti inspirational kuona zvigadziriswe zvikwata zvakakura munyika yose. Kuumba mifananidzo yakajeka ndeyomukati wehupenyu hwedu. Pamwoyo weboka redu rine tarenda, kune ruzivo rwakasiyana-siyana nehutano-hunyanzvi, hunoita kuti musangano unobatanidza apo tinogona kushanda pamwe chete kuti tigadzirise zvinetso uye tinounza zviratidzo zvikuru kuvatengi vedu. Takawana zvimwe zvinoshamisa zvinotaridzika zvinobudirira zvinoshanda kuburikidza nekupa mazano matsva ekugadzira basa rakaoma. Isu tine simba uye tarenda rekudzikisa kuti tifanire zvinodiwa nevatengi vedu.
Nhoroondo yedu yakawanda yakafambisa inosanganisira mishonga ye120 kusanganisira Tomb Raider, Peter Rabbit, Thor: Ragnarok, Logan, X-Men: Apocalypse, Game of Thrones Nguva 6, The Legend of Tarzan, Vanamwari veEgypt, Pan, X-Men: Days of Future Past, The Hunger Games franchise, Harry Potter franchise, Gravity, The Wolverine, Prometheus uye The Great Gatsby.
dzidzo Spears & Arrows Migumisiro Yokuona	2018-11-08
Previous: Calvary Chapel Modesto Inosimudza Dzimba Rokuchengetedza, Kuvandudza Kubudiswa Pix BPswitch Integrated Production Switcher
Zvadaro: Bannister Lake Inoshuma Partnership ne Live Data Graphic Design Firm Motion Path
Hey Buddy !, Ndakawana ruzivo urwu kwauri: "Kusimuka Sun Pictures Education: Joannah Anderson Hurukuro". Heino chibatanisi chewebhu: https://www.broadcastbeat.com/rising-sun-pictures-education-joannah-anderson-interview/. Ndatenda.